China Industrial Production osisi Atiya ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta | Zhenyuan
Industriallọ ọrụ mmepụta ihe: na-ezo aka n'ụdị ụlọ niile eji eme ihe ma ọ bụ na-akwado nkwado, gụnyere ụlọ ọrụ dị mkpa, ụlọ enyemaka na ụlọ ọrụ mgbakwunye.Plants na ọrụ, njem, azụmahịa, ihe owuwu, nyocha sayensị, ụlọ akwụkwọ na ngalaba ndị ọzọ ga-esonye. gaa ebe a na-eji emepụta ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-agụnye ụlọ mgbakwunye ha.
Industrial ogbako nwere ike kere n'ime otu-storey ulo oru ulo oru na multi-storey ulo oru ulo oru dị ka ya ụlọ Ọdịdị ụdị.
Imirikiti ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ụlọ dị na ụlọ ọrụ ọkụ, elektrọnik, ngwa ọrụ, nkwukọrịta, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Kinddị ụlọ ọrụ mmepụta ihe anaghị adịkarị elu, na imepụta ọkụ ya yikwara ka ụlọ nyocha ụlọ sayensị na-ahụkarị, ọtụtụ n'ime ha na-enwetakwa atụmatụ ọkụ ọkụ ọkụ. ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na dịka mkpa nke mmepụta, ọtụtụ n'ime ha bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe otu ụlọ nwere ọtụtụ ụlọ, ya bụ, ọtụtụ osisi na-ahazi n'usoro n'akụkụ ibe ha. Oge ọ bụla nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ dị iche iche achọrọ.
A na-ekpebi obosara (oge), ogologo na ịdị elu nke ụlọ ọrụ otu ụlọ-elu otu ụlọ dịka ihe ndị achọrọ na teknụzụ na-adabere n'ịhụ ụfọdụ ihe modulu chọrọ ụlọ. Oge nke osisi B: n'ozuzu 6, 9, 12, 15, 18, 21 , 24, 27, 30, 36m ........ onye dị elu nwere ike iru 30 ~ 40m, ma ọ bụ karịa karịa. Ogologo na elu nke ogbako ahụ bụ isi ihe ndị a tụlere n'ichepụta ọkụ nke ogbako ahụ. Na mgbakwunye, dịka ọganihu nke mmepụta ụlọ ọrụ na mkpa nke ịkwaga ngwaahịa n'etiti ngalaba, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere cranes, nke nwere ike ibuli igwe nha nke 3 ~ 5t na ndị buru ibu nke narị otu narị tọn.
Standardkpụrụ nhazi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-adabere na usoro nke ogbako ahụ, na ihe omumu ihe omumu na-ekpebi ụdị ogbako ahụ dịka mkpa nke usoro teknụzụ na ọnọdụ mmepụta.
Standard osisi imewe nkọwapụta
1. A ga-arụpụta atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka ụkpụrụ na ụkpụrụ nduzi dị mkpa nke Ọchịchị, bụrụ ndị tozuru oke na teknụzụ, ndị nwere akụ na ụba, na-etinye aka na nchekwa, hụ na ịdị mma, ma kwekọọ na ihe nchekwa nke nchekwa ike na nchekwa gburugburu.
2. Nkọwa a metụtara atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ewuru ọhụrụ, nke ewughachi ma ọ bụ gbasaa, mana ọ bụghị ụlọ dị ọcha nke ndu na nje bacteria dị ka ihe na-achịkwa ihe. Usoro nke Usoro a gbasara mgbochi ọkụ, mwepu na ụlọ ọrụ ọgụ ọkụ agaghị emetụta. atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke dị n’ime ala nwere ụlọ dị elu karịa mita 24.
Nkeji edemede 3 mgbe ejiri ụlọ izizi maka mgbanwe teknụzụ dị ọcha, usoro ihe omumu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-adabere na ihe achọrọ maka usoro mmepụta, gbanwee usoro dịka ọnọdụ mpaghara dị, lekọta n'ụzọ dị iche, ma jiri ụlọ ọrụ teknụzụ dị ugbu a.
Ọdịdị nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-emepụta ọnọdụ ndị dị mkpa maka owuwu, ntinye, ndozi, njikwa, ule na ọrụ nchekwa.
Atụmatụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-agbaso ihe ndị dị mkpa nke ụkpụrụ mba na ugbu a na mgbakwunye na ntinye nke koodu a.
Isii, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ụlọ nwere onwe (ụlọ ọrụ), yana ụlọ nwere onwe (ebe obibi), ebe dị anya n'etiti ụlọ abụọ ahụ bụ mita 10, nke kacha nso dịkarịa ala karịa mita 5, iji wepụ nnabata nke ndị ruru eru Nhazi nke ala ala na mpaghara nke ụlọ bụ 1: 3.
Ulo oru mmeputa ihe mmeputa
Orylọ ụlọ nrụpụta
Atụmatụ kreenu doo
N'ozuzu 3D nlereanya eserese nke ígwè Ọdịdị
Mgbidi nhazi nke mgbidi
Nhazi usoro ụlọ
Eke elu igwe mepụtara 1
Nkedo igwe eji eme ihe
Solid osise nke mkpokọta ígwè etiti
Nke gara aga: Imewe Obodo
Osote: Ndị ọrụ mmadụ na nhazi ọkwa
Ihe eji eme ihe eji eme ulo